Faah Faahin:-Ganacsade Caan ah oo lagu dilay Qarax loogu xiray Gaarigiisa | Koonfur Galbeed News
HomeArimaha GudahaFaah Faahin:-Ganacsade Caan ah oo lagu dilay Qarax loogu xiray Gaarigiisa
Faah faahino dheeraad ah ayaa la helayaa qarax Khasaaro geystay oo xalay ka dhacay Magaalada Muqdisho,kaasi oo ahaa mid lagu soo xiray gaari nooca raaxada ah.
Qaraxaas ayaa waxaa uu sigaar ah uga dhacay Isgoyska Baar Ubax ee Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir,isla markaana waxaa loogu soo xiray Nin la sheegay inuu ahaa Ganacsade Caan ah.
Gaariga uu watay Ganacsadaha ayaa waxaa la socday Xaaskiisa,waxaana qaraxas ku geeriyooday Cali Macalin Maxamed (Cali Neero) oo ahaa Ganasadihii lahaa gaariga ayna ka badbaaday Xaaskiisa.
Sidoo kale waxaa la tilmaamay in marka hore Cali Neero dhaawac ahaa goobta uu falka ka dhacay looga qaatay ,isla markaana la dhigay Isbitaalka Digfeer,hayeeshee markii dambe halkaas uu ku geeriyooday.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa tegay goobta uu qaraxa ka dhacay,iyagoo halkaas ka sameeyay baaritaano aan wax Natiijo ah ka soo bixin.
Allaha u naxariistee Cali Neero ayaa ka mid ahaa Ganacsatada Magaalada Muqdisho ku iibisa khudaarta laga keeno Gobolka Shabellaha Hoose, mana jirto cid sheegatay masuuliyadda dilkiisa.
Amniga Magaalada Muqdisho ayaa maalmihii dambe u muuqda mid faraha kasii baxaya,iyadoona ay kusoo badenayaa qaraxa nooca lagu dhejiyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan,kuwaasi oo Mas’uuliyadooda sheegta Al-shabaab.
DEG DEG:-Madaxweynaha Puntland oo Goordhow u duulay Kismaayo